Okraina: Ny “Photo Art” Dia Manampy Amin’ny Ady Atao Amin’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2012 17:20 GMT
Tamin'ny fotoana nankalazàna ny Andro Eran-tany Ho An'ny SIDA (Novambra –Desambra, 2011) dia nisy fampirantiana ny sary avy tamin'ny tetikasa “AIDS- Open Faces” natao tao amin'ny tranoheva ‘Lavra’ tao Kiev. Ny fampirantiana dia natokana manontolo ho an'ireo olona mitondra ny VIH/SIDA ary nokarakarain'ny Elena Pinchuk AINTIAIDS Foundation. fikambanana mpanao asa soa tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny sarin'ireo olona mitondra ny VIH sy ny fianakavian'izy ireo izay naseho tamin'ny fampirantiana dia nalain'i Brent Stirton mpaka sary fanta-daza avy ao amin'ny masoivoho ‘Getty Images’ avy any New York.
Ireo sary naseho tamin'ny fampirantiana (hita ao amin'ny aterineto) dia mahatalanjona tokoa ary maro amin'izy ireo no tsy mora ny mijery azy. I Brent Stirton niaraka taminà mafàna fo avy ao amin'ilay fikambanana sy ONG mpiara-miombon'antoka hafa dia namakivaky an'i Okraina ary naka sary ireo ankizy teny an-dàlana tao Odessa, ny toeram-ponenan'ireo mpivenjivenjy (tsiganes), ireo fianakaviana miaraka aminà ankizy voan'ny VIH sy ireo zaza kamboty miaina miaraka amin'ny otrikaretina VIH, ireo mpitsindrona zava-mahadomelina, ireo mpivarotena sy ireo olona voafonja, araka ny tatitra avy ao amin'ny tranonkalan'ny AITIAIDS Foundation. Ilay tetikasa dia feno ny sarin'ireo olona tena marary mafy ka hatramin'ireo ‘tantara tsara fiafàra’ – sarin'ireo olona novonjena tamin'ny alalan'ny fitsaboana “antiretroviral” izay malalaka ny fahazoana azy ao Okraina amin'izao fotoana noho ny fanohanana iraisam-pirenena na ny sarin'ireo olona izay nampitsahatra ny fidorohana zava-mahadomelina na ny sarin'ireo zaza kamboty mitondra ny VIH ka nahita fianakaviana vaovao.
I Olga Ivanenko , mpanao gazety sady bilaogera, nanampy an'i Brent Stirton tamin'ny fikarakaràna ny fakàna ny sary tao Okraina ny taona 2005 sy 2011 dia nizara ny fahatsiarovany ny fampandehanana ilay tetikasa tao amin'ny bilaoginy. Manoratra izy hoe:
Nanamarika i Olga fa ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa sary dia nanova tanteraka ny fitsaratsaram-poana mikasika ny olona mitondra ny VIH. Namoaka izy fa:
Mieritreritra i Olga fa ny asa lehibe indrindra amin'ilay tetikasa dia ny manao izay hampieritreritra ny fiarahamonina mikasika ireo olona tratry ny VIH/SIDA. Manoratra izy hoe: